U Haul Neighborhood Dealer in Ceres, California with Reviews & Ratings - YP.comFind People•Advertise With UsBrowseFind PeopleFeatured CollectionsRestaurantsAutomotiveHome ImprovementHealth & WellnessAttorneysPeople Searched For...WindshieldWssBelly Dance CostumesFireplacesRodriguez TowingNeo XKids World DentalGreyhound Bus LinesPizza CalzoneCeres Awning CoWindmere ApartmentsRocha TransportationFallas ParedesWestern Union 24 HoursButcher SuppliesAmerican Massage CenterAuto Body ShopAutomobile Body Shop EquipmentMoose ClubSenior Assisted Living FacilitiesBal FarmBest Buy MobileBicycle StoresAre you alocal business owner?Advertise with YPor call 888-367-2194What do you want to find?Search by business name, or keywordnearWhere? Address, ZIP Code, or NeighborhoodMy current locationSearchSign In•JoinHomeCeres, CAU Haul Neighborhood DealerCeres U Haul Neighborhood DealerSort:DefaultDefaultDistanceRatingName (A - Z)FiltersFiltersMore NeighborhoodsAugustCeresCivic CenterDowntown PattersonHome Builder'sKennedyNaraghi LakesNewmanOakdalePacificSeaportSierraWaterfordWrightYosemite VillaDoneClear AllMore CategoriesBoxes-Corrugated & FiberBoxes-Corrugated & Fiber-Wholesale & ManufacturersBusiness Documents & Records-Storage & ManagementCarpet & Rug Cleaning Equipment RentalContractors Equipment RentalIndustrial Equipment & SuppliesLocal Trucking ServiceMoversMovers & Full Service StorageMoving BoxesMoving Equipment RentalMoving-Self ServicePaper Products-Wholesale & ManufacturersPortable Storage UnitsPropane & Natural GasPublic & Commercial WarehousesRecreational Vehicles & Campers-StorageRental Service Stores & YardsSelf StorageStorage Household & CommercialTrailer HitchesTrailer Renting & LeasingTruck RentalVan Rental & LeasingDoneClear AllCategoryMoving-Self ServiceTrailer HitchesTruck RentalMore »FeaturesBook a TableCouponsBook an AppointmentNeighborhoodsAugustSeaportWrightMore »Sponsored LinksBad Credit Auto LoansGet up to $35K, Apply in 3 Minutes.$0 Down Options, Same Day Approvalswww.AutoCreditExpress.comAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?1. U-HaulServices1940 Kinser RdCeres, CA 95307(209) 538-7002Truck RentalMoving Equipment RentalWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?2. U-Haul1736 Herndon RdCeres, CA 95307(209) 522-6124Truck RentalMoving Equipment RentalWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?3. U-Haul3032 Dale CtCeres, CA 95307(209) 241-5297Truck RentalMoving Equipment RentalWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?4. U-Haul435 Empire AveModesto, CA 95354(209) 241-5297Truck RentalMoving Equipment RentalWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?5. U-Haul1349 Mitchell RdModesto, CA 95351(209) 416-3636Truck RentalMoving Equipment RentalWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?6. U-Haul800 W Hatch RdModesto, CA 95351(209) 579-7640Truck RentalMoving Equipment RentalWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?7. U-Haul110 Trask LnModesto, CA 95354(209) 521-2996Truck RentalMoving Equipment RentalWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?8. U-Haul819 S 9th StModesto, CA 95351(209) 523-2037Truck RentalMoving Equipment RentalWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your home collection!Error when adding to home collectionThis business was removed from the home collectionInaccurate Result?9. U-Haul of Modesto4131 McHenry AveModesto, CA 95356(209) 576-8249Truck RentalPortable Storage UnitsWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?10. U-Haul3460 Oakdale RdModesto, CA 95355(209) 578-5254Truck RentalMoving Equipment RentalWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your home collection!Error when adding to home collectionThis business was removed from the home collectionInaccurate Result?11. U-Haul at Kansas Ave837 Kansas AveModesto, CA 95351(209) 577-1030Truck RentalWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?12. U-HaulServices3400 N Golden State BlvdTurlock, CA 95382(209) 523-2037Truck RentalMoving Equipment RentalWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?13. U-HaulServices3941 McHenry AveModesto, CA 95356(209) 538-2022Truck RentalSelf StorageWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?14. U-Haul2716 Coffee RdModesto, CA 95355(209) 241-5300Truck RentalMoving Equipment RentalWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?15. U-Haul1221 Scenic DrModesto, CA 95350(209) 529-9940Truck RentalMoving Equipment RentalWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?16. U-Haul2100 Sisk RdModesto, CA 95350(209) 522-6124Truck RentalMoving Equipment RentalWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?17. U-Haul229 Bangs AveModesto, CA 95356(209) 524-7472Truck RentalSelf StorageWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?18. U-Haul2021 Standiford AveModesto, CA 95350(209) 578-5254Truck RentalMoving Equipment RentalWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your home collection!Error when adding to home collectionThis business was removed from the home collection19. Self Store-ItServices1325 Martin AveModesto, CA 95350(209) 527-7563Truck RentalTrailer HitchesWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?20. U-Haul805 S Kilroy RdTurlock, CA 95380(209) 262-1738Truck RentalMoving Equipment RentalWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?21. U-Haul1220 S 1st StTurlock, CA 95380(209) 634-9662Truck RentalMoving Equipment RentalWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?22. U-Haul2707 Patterson RdRiverbank, CA 95367(209) 863-1124Truck RentalMoving Equipment RentalWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?23. U-Haul2906 Patterson RdRiverbank, CA 95367(209) 315-8169Truck RentalMoving Equipment RentalWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?24. U-Haul(1)4908 Salida BlvdSalida, CA 95368(209) 543-1744Truck RentalMoving Equipment RentalWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?25. U-Haul4000 Salida BlvdModesto, CA 95358(209) 241-5300Truck RentalMoving-Self ServiceWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?26. U-Haul1400 Lander AveTurlock, CA 95380(209) 667-1376Truck RentalMoving Equipment RentalWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?27. U-Haul12405 1/2 Yosemite BlvdWaterford, CA 95386(209) 442-4678Truck RentalMoving Equipment RentalWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?28. U-Haul977 S Yosemite AveOakdale, CA 95361(209) 848-1055Truck RentalMoving-Self ServiceWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?29. U-Haul25 S El Circulo AvePatterson, CA 95363(209) 892-7880Truck RentalMoving Equipment RentalWebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?30. U-Haul260 N Yosemite AveOakdale, CA 95361(209) 848-9004Truck RentalMoving Equipment RentalWebsiteDirectionsMore InfoSponsored LinksShowing1-30
of 72results123NextIf we're missing a business and you'd like to make a suggestion, please do! Add a business.Add a New CollectionOops! There was a problem saving the new custom collection.Please try again.Collection Name cannot be emptyUpload a Photo(optional)Remaining Characters: 100Remaining Characters: 500CancelSaveMap ViewFeatured Truck Rentalin Ceres, CaliforniaAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?Penske Truck Rental1960 Rockefeller DrCeres, CA 95307Other Locations »(209) 900-1197WebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your travel collection!Error when adding to travel collectionThis business was removed from the travel collectionInaccurate Result?Enterprise Rent-A-Car1636 Carnegie StTurlock, CA 95380(209) 632-8000WebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your travel collection!Error when adding to travel collectionThis business was removed from the travel collectionInaccurate Result?Enterprise Rent-A-Car(2)4623 McHenry Ave Ste CModesto, CA 95356(209) 577-4700WebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?Penske Truck Rental117 Creekwood DrModesto, CA 95357(888) 490-4478WebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?Penske Truck Rental5230 Squire Wells WayRiverbank, CA 95367(800) 582-0561WebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your travel collection!Error when adding to travel collectionThis business was removed from the travel collectionInaccurate Result?Enterprise Rent-A-Car707 7th StModesto, CA 95354(209) 491-0400WebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?Penske Truck Rental1325 Paulson RdTurlock, CA 95380(888) 975-8809WebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your travel collection!Error when adding to travel collectionThis business was removed from the travel collectionInaccurate Result?Enterprise Rent-A-Car(1)135 S 5th Ave , Suite AOakdale, CA 95361(209) 845-1121WebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your travel collection!Error when adding to travel collectionThis business was removed from the travel collectionInaccurate Result?Enterprise Rent-A-Car(1)250 N El Circulo AvePatterson, CA 95363(209) 892-5450WebsiteDirectionsMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your other collection!Error when adding to other collectionThis business was removed from the other collectionInaccurate Result?Rush Truck LeasingServing the Ceres Area.(800) 626-5200WebsiteMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your home collection!Error when adding to home collectionThis business was removed from the home collectionInaccurate Result?Uncle Bob's Self Storage(1)Find a Location(866) 247-6895WebsiteSpecial OffersVideoMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your travel collection!Error when adding to travel collectionThis business was removed from the travel collectionInaccurate Result?Alamo Rent-A-Car(27)Serving the Ceres Area.(800) 362-2725Drive Alamo. Drive HappyWebsiteMore InfoAdd to mybookRemove from mybookAdded to your travel collection!Error when adding to travel collectionThis business was removed from the travel collectionInaccurate Result?Enterprise Rent-A-Car(34)Find a Location(866) 799-7959Free pick-up from your home, office or repair shopWebsiteSee Our RatesVideoMore InfoAboutAbout UsSite FeedbackContact UsAdvertise with UsCareers - We're HiringCorporate BlogEngineering BlogLegal